कानमा कस्ता रोग लाग्छन् ?समयमै उपचार नगरे कस्ता समस्या आउँछन् हेर्नुस् ?
प्रकासित मिति : २९ असार २०७६, आईतवार प्रकासित समय : १२:२४
कान पाक्नुका धेरै कारण छन्। एउटा एक्विड ओटाइटिस मिडिया (केही समयदेखि कान पाक्ने)हुन्छ भने अर्को क्रोनिक ओटाइटिस मिडिया (लामो समयदेखि पाकिरहने)हुन्छ। त्यस्तै कसैको लामो समय पाक्छ। कान पाक्ने समस्यालाई ओटाइटिस मिडिया पनि भनिन्छ। छोटो अवधिका लागि पाक्ने समस्या औषधि उपचारपछि छिटै निको हुन्छ।
पिनास हुँदा, कानमा तेल हाल्दा, टनसिल हुँदा,
मौसम परिवर्तन हुँदा र नुहाउँदा पनि कानमा पानी छिरेर संक्रमण हुन सक्छ।
क्रोनिक(लामो समय कान पाक्ने)कसरी हुन्छ ?
क्रोनिक अटोटाइटिस मिडियामा पनि अर्को कोलेसटियटोमा(कानको हड्डी कुहिने) समस्या हुन्छ। यसलाई स्क्वाइमस डिजिज पनि भनिन्छ। यसमा कानको बाहिरी छाला जस्ता कुरा (इपिथिलम)भित्र छिर्छ। छाला नहुनु पर्ने ठाउँमा छाला जस्तो पलाउन थाल्छ। त्यसले गर्दा विभिन्न इन्जाइम उत्पन्न हुन्छन् र विस्तारै हड्डी कुहिन थाल्छ। त्यसपछि कान पाक्छ। कानको रोगमध्ये नराम्रो मानिने यो रोग भने नेपाल र दक्षिण एसियामा प्रचलित छ। यो रोग सुरुकै अवस्थामा पहिचान गर्न सक्यौं भने सानो शल्यक्रियाले निको हुन्छ। ढिला भयो भने उपचार कठिन हुन्छ।
यो रोगको उपचार ढिला भए कस्ता समस्या आउँछन्?
कानको नजिक मस्तिष्कको भाग हुन्छ। हड्डी कुहिने रोगको सुरुकै अवस्थामा उपचार भएन भने भित्रभित्रै फैलिएर मस्तिष्क नजिकको हड्डी खिइन्छ र मस्तिष्कभित्र संक्रमण हुन्छ। त्यसपछि मस्तिष्क ज्वरो, बे्रन एप्सिस तथा इन्सोफ्लाइटिस हुन्छ र मुख बाङ्गिने, कान नसुन्नेजस्ता समस्या आउँछन्। कान पाक्ने समस्यालाई म्युकोजल (कानको जाली प्वाल पर्ने) भनिन्छ भने हड्डी कुहिने रोगलाई स्क्वाइमस (कानको हड्डी कुहिने)भनिन्छ। यी दुवै रोग नेपालमा बढी देखिन्छन्।
कानको जाली प्वाल पर्ने र हड्डी कुहिने रोग नेपालमा बढी देखिनु कारण?
मुख्य कारण नेपालको हावापानी हुनुपर्छ। दोस्रो व्यक्तिगत सफाइ, जनघनत्व, सामाजिक व्यवहारआदि। जस्तो कि तराईमा म्युकोजल (कान पाक्ने)रोग झनै बढी छ। तराईमा फोहोर पोखरीमा पौडी खेल्ने र राति एउटै कोठामा धेरैजना सुत्ने चलन छ। यसले पनि यो समस्या देखिएको हो।
पोखरीमा पौडिँदा कसरी कान पाक्ने समस्या हुन्छ?
नेपालमा कुल जनसंख्याको ७ दशमलव २ प्रतिशतमा कान पाक्ने समस्या छ।
यीमध्ये १ दशमलव ३ प्रतिशतमा हड्डी कुहिने रोग रहेको छ।
जालीमा प्वाल पर्दा कस्तो लक्षण देखिन्छ?
जालीमा प्वाल पर्नुको कारण चोटपटकले मात्र हो?
नेपालमा कान पाक्ने रोगका बिरामी कति छन्?
क्रोनिक र एक्विड दुवैमा मस्तिष्कको भित्रबाहिर संक्रमण हुन्छ। कानको मुख्य हड्डीमा संक्रमण हुने र कानको पछि प्वाल परेर बाहिरै पिप निस्कने हुन्छ। त्यसैगरी फेसियल नर्भमा संक्रमण भएपछि फेसियल प्यारालाइसिस हुन्छ। आधा फेस चल्दैन, मुख बाङ्गिन्छ, आँखा झिम्काउन सक्दैन। भित्री कानमा संक्रमण भएर असर परे नसुन्ने र चक्कर लाग्ने समस्या हुन्छ। ल्याटी फिस्टुला(चुहिने)भएर चक्कर लाग्ने हो। पेट्रोस बर्नमा संक्रमण भएर आँखा नदेख्ने समस्या आउँछ। कानवरिपरि पिप जम्मा हुनसक्छ। त्यसैगरी संक्रमण मस्तिष्कमा पसेर मस्तिष्क ज्वरो र इन्सोफ्लाइटिस हुन्छ।
कानको संक्रमण कसरी हुन्छ?
कानमा तेल नहाल्ने, आमाले बच्चालाई दूध खुवाउँदा सुताएर नखुवाउने, कानमा सानै समस्या आए पनि चिकित्सककोमा उपचार गराउने, गर्भवती आमाले ध्यान दिने, साना बच्चाको अनिवार्य रूपमा कानको जाँच गराउने। गर्भवती हुने क्रममा पनि बच्चाको कानमा समस्या आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीले पनि ध्यान दिने, बोतलको दूध नखुवाउने, खुवाउनै परे सुताएर नखुवाउने, सानो दुर्घटना भए पनि औषधि उपचार गराइहाल्ने, आफैं औषधि किनेर कानमा नहाल्ने र अनिवार्य कान जाँच गराउने। त्यस्तै कानेगुजी निकाल्दा एयरवर्ड प्रयोग नगर्ने, कानेगुजी निकाल्नुपरे स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा मात्र निकाल्ने, कान नकोट्याउने।नागरिक दैनिकबाट साभार।